Home Wararka Farmajo waa in Xabsi Guri la geliyo inta Doorashada laga Qabanayo.
Farmajo waa in Xabsi Guri la geliyo inta Doorashada laga Qabanayo.
Sidaan horay idiin kugu sheegnay Xalay Farmajo waxaa uu ka shaqeeyey in hadal jeedinta doorashada aqalka sare ee Somaliland la joojiyey, dibna loo dhigo muddo aan la cayimin, taas oo ah hawl uu ka shaqeeyey Farmajo. Heshiiskii dadaalka dheer uu uga baxay RW Rooble iyo akhyaar kale ayaa maanta u muuqda inuu qarka u saaran yahay inuu burburo.
Xalay ayaa Villada loogu yeeray odayaal ka soo jeeda Somaliland oo la soo marsiiyey inay la joojiyo hadal jeedintii ku aadaneyn kuraasta aqalka sare ee Somaliland, waana dhibaatada uu si joogto ah ugu shqeynayo Farmajo inuu wax kala furfuro si dhibaato uu dsalka iyo dadka Somaliyeed ugu abuuro.
Guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi(Soomaaliland) ayaa war ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in dib u dhac uu ku yimid habraacii doorashada aqalka sare ee gobolada waqooyi oo 27 september oo maanta ah loo balansana in ay musharixiinta soo jeediyaan khudbahooda.
Qoraalkooda oo ay ku yiraahdeen “Waxaan ku war gelinaynaa dhamaan musharixiintii isku diiwan geliyay tartanka Doorashada Aqalka Sare ee Somaliland in uu dib u dhac ku yimid hadal jeedintii berri ay jeedin lahaayeen musharixiintu dib ayaan ka soo sheegi doonnaa waqtiga”
Halkaan waxaa ka muuqata xataa inaan waqti loo qaban, waxaya caddeneysaa inuu Farmaajo u joogo inuu kala furfuro heshiis walba oo keenaya in dhinaca doorashada la la’aado.
Haddaba RW Rooble, Golaha watashiga iyo Midowga Murashixiinta waxaa la gudboon inay Faramjo Viallada ka saaran oo ay Xabsi guri geliyaan inta doorashada laga qabanayo waayo waxay dhibaato ku yihiin isaga iyo Fahad oo iskaashanaya arrimahaan soo socda.
Tan koowaad waa In doorasho la qabto. Tan labaad waa Amaaanka dalka oo xataa intii uu Fahad soo noqday waxaa dhacay toddoba qarax oo ay dad masaakiin iyo ciidamo diifacayey dalkooda ku dhinteen, qaraxyadaas oo ka kala dhacay Magaalooyinka Buulo Burte, Marka, Baraawe, Ceelwaaq, Villa Baydhabo, Tredisho iyo kii Caalgaabta oo lagu dilay gabar la leeyahay waxay saaxiib dhow la ahayd Ikran ahn. Iyo tan seddexaad oo ah cadaallad u helidda dacwadda Ikran Tahliil oo fure u noqon karta kiisas badan oo hadda la qariyo laguna fadhiyo.
Nin Shirbay oo u adkeysan waayey kooxihii dagaal oogayaasha ayaa yiri: Dalkaanu dowlad waa rabyaa Waxaasa diidan duul qarsoon. Hadda waxaa diidan Faramjo iyo Fahad oo mar waliba dadaal ugu jiro inaan doorashada la qaban.
Askari ka tirsan ciidan Dowladda DF oo maanta lagu dilay ...